Ukuhlanganiswa kwe-ORCID ku-OSF, ScienceOpen neZenodo nge-AfricArXiv - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-27th February ngo-2020 I-27th February ngo-2020
I-ORCID futhi i -AfricaArXiv iyasebenzisana ukusiza ososayensi base-Afrika ekuqhubekiseni imisebenzi yabo besebenzisa izikhombi ezihlukile. I-ORCID isekela iAfriArXiv futhi ikhuthaza ososayensi base-Afrika kanye nososayensi abengewona ama-Afrika abasebenza ngezihloko zase-Afrika - ukuthi babelane ngokuphuma kwabo ocwaningweni oluvulekileyo lwe-Open Access, iphephabhuku noma kwamanye amapulatifomu edijithali atholakala ngokukhululekile.
Njengengxenye yengqalasizinda ebanzi yedijithali edingekayo ukuze abacwaningi babelane ngolwazi ngezinga lomhlaba wonke, i-ORCID inika amandla ukuxhumana okuthembekile nokuthembekile phakathi kwabacwaningi, amagalelo abo, kanye nezinhlangano zabo ngokunikeza isihlonzi (i-URL ye-https) enenombolo enamadi-16 elihambisana ne-ISO Standard ISO 27729) ngabantu okufanele basebenzise igama labo njengoba benza ucwaningo, ubuxhakaxhaka kanye nokwenza imisebenzi emisha emhlabeni jikelele.
Funda kabanzi mayelana ukwakheka kwe-ORCID iD.
I-KiaArXiv ihlinzeka ngesiza samahhala kososayensi base-Afrika ukulayisha imibhalo yabo yesandla, imibhalo yesandla eyamukelekayo (imibhalo yangaphambilini), namaphepha ashicilelwe. Ngokwenza njalo, sisebenzisana ne Isikhungo se-Open Science, UZenodo, Futhi IsayensiOpen, ngamunye wabo ohlinzeka ngesibalo lapho ososayensi base-Afrika bangalayisha futhi basakaze imiphumela yabo njengamalungu omphakathi we-KiaArXiv. Onke ama-repositori amathathu ane-ORCID ahlanganiswe ohlelweni lwawo futhi avumela ososayensi ukuba babhalise ngomthungo, bangene ngemvume futhi bavuselele idatha yabo yemisebenzi kurekhodi labo le-ORCID.
Ngokubambisana nalokhu, sihlose ukukhuthaza ososayensi abaningi base-Afrika ukuthi babhalise izikhombi zabo ze-ORCID ukuthi zikhonjwe ngokuhlukile, zixhunyaniswe nemisebenzi yabo kanye nokunikela futhi zikhombise impumelelo yabo kwizikhungo zocwaningo, abaxhasi kanye nabashicileli ngokufanayo.
Bhalisa i-ORCID iD yakho
Ngabe usunayo i-ORCID iD? Sitshele ngesipiliyoni sakho.
Xhumana nathi uma ngabe unemibuzo noma imibono: info@africarxiv.org.
Ukuthola eminye imininingwane nokuholwa nge-ORCID yiya ku support.orcid.org.
I-ORCID yinhlangano engenzi nzuzo isiza ukudala umhlaba lapho bonke ababamba iqhaza ocwaningweni, ubuhlakani kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha bekhonjwa ngokuhlukile futhi baxhunyaniswe kumagalelo abo nezinhlangano zabo, ezinhlakeni zokuyala, imingcele nesikhathi. | orcid.org
I-AfricArxiv ibekelwe ukusheshisa nokuvula ucwaningo kanye nokubambisana kososayensi base-Afrika kanye nokusiza ekwakheni ikusasa lokuxhumana kwezazi emhlabeni jikelele. Imibhalo yesandla yangaphambilini kanye namanye amafomethi aphethwe endaweni yesikhulumi se-KiaArxiv avumela ukusatshalaliswa mahhala nokusheshayo kanye nengxoxo yomhlaba yokuphuma kocwaningo lwase-Afrika.
Categories:	Vula UkufinyelelaVula iSayensiPublishing
felis Lorem luctus elit. commodo libero. vel, lectus amet,